Vaovao - Miaraka amin'ny finoana kely sy hazavana kely dia tontosa soa aman-tsara ny kaonseritra Fang Piano Charity faharoa
Miaraka amin'ny finoana kely sy hazavana kely dia notontosaina tamim-pahombiazana ilay kaonseritra Fang Piano Charity faharoa
Ny harivan'ny 31 desambra 2020, notontosaina tamim-pahombiazana tao amin'ny lapan'ny konseritra Xiamen Hongtai ny konseritra fanatanjahan-tena faharoa natolotry ny mpitendry piano Fang Yan sy ny fikambanana mpanao asa soa "Dandangzhe Foundation". Nahasarika ny sain'ny mpanatrika ilay fampisehoana nahafinaritra. Nisy ny tehaka nirefodrefotra. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. ary ny Huarui Culture dia manana voninahitra handray anjara amin'ilay mpanohana.
Ity fampisehoana ity dia tsy fampisehoana piano madio fotsiny fa koa fampisehoana fiantrana. Toy ny kaonseritra fiantrana voalohany, ny vola miditra rehetra amin'ity fampisehoana ity (aorian'ny fihenan'ny fandaniam-bola) dia hatolotra ho an'ny Fujian Dandangzhe Foundation, natokana ho an'ny programa famakiana "Every class has a Book Corner", amin'ny alàlan'ny fampiasana mozika, ny fiteny mahafinaritra indrindra, ho an'ny manohana ny famakiana avo lenta ny ankizy any ambanivohitra. Mandritra izany fotoana izany, valiny tsara ihany koa izany ho an'ny Komitin'ny Antoko Kaomina ao Xiamen sy ny tetikasan'ny governemanta amin'ny fananganana "Xiamen Fitiavana".
Ho fanampin'ny repertoire piano, ny kaonseritra dia hampiditra singa mozika tanora kokoa sy maro karazana kokoa. Hiara-hiaka-tsehatra i Fang Yan sy ireo mpitendry mozika maro. Ny fampifangaroana endrika piano, lokanga ary zava-kanto hafa dia mahatonga an'ity kaonseritra ity ho samy hafa kokoa. Ireo vahiny nasaina fampisehoana toa ilay zatovo mpitendry lokanga sy ny lehiben'ny Orkesitra Orkesitra ho an'ny Tanora China (NYO-China) Xie Liyuan ary ilay tanora pianistista Li Guochao avy any Alemana dia nitondra lanonana mozika maroloko ho an'ny mpijery.
Mampirehitra ny fitiavana ny fitiavana ary misy fiantraikany amin'ny fiainana ny fiainana. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. dia nanolo-tena hanome fitaovana diamondra avo lenta ho an'ny tsenan'ny fitotoana makirana sy ny famolavolana ary hampiroborobo ny fampandrosoana ny indostrian'ny sinoa ao Shina. Izy io koa dia nandray andraikitra mavitrika amin'ny andraikitra sosialy amin'ny ho avy. Yuxin dia hanohy hamaly ireo filàna ara-tsosialy, handray anjara bebe kokoa amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny fiarahamonim-pirenena, ary hanome ny hafanana sy fitiavana ireo matihanina eto an-tany ho an'ny fiarahamonina!
Pads polishing vita amin'ny beton, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Kiraro fitotoana PCD, Kiraro fanaovana diamondra, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kiraro fitotoana beton,